Taariikhda Sadio Mane - BBC Somali
Weeraryahankan ayaa ka ciyaari kara dhankii la doonaba - ka bixid, qeybta dhexe amaba afka hore - wuxuuna noqday mid kamid ah ciyaar yahanada ugu khatarsan Horyaalka Ingiriiska, halka dhanka kalana uu noqdey mid kamid ah ciyaar yahanada ugu wanaagsan Africa.
Wuxuu ahaa in muda ah udub dhaxaad u ahaa Liverpool, isagoo kaga guuleystay 4 - 3 kooxda Arsenal, ee furitaanka xili ciyaareedkan.
Mane ayaa ku sameeyay mar kale raad aad u weyn ciyaarta xigta, isagoo gacan ka geystay goolasha ayLiverpool ay kaga badisay Burton Albion 5 - 0 ee koobka EFL.
Waxaa xigtay inuu dhaliyey hal gool mid kalana uu abuurey fursadii lagu dhalin lahaa, iyadoo ay kooxda kaga adkaatay 4 - 1 horyaalka Ingiriiska kooxda Leicester City, waxey ku dhalisay arrintani taageerayaasha Anfield farxad xad dhaaf ah.
Goolashiisa kale ayaa ku yimid guulasha horyaalka ee Hull iyo West Brom, iyo tii ugu darneyd dhawaanahan oo uu ku dubtay 6 - 1 kooxda Watford.
Durbadiiba go'aankiisa uu ku joojiyey iskuulka markii ay aheyd 15 sano da'diisu, isagoo goostay inuu qaado dhabada ah inuu noqdo ciyaaryahan caalami ah, ayaa ka dhigtay iney usoo hoydaan abaalmarino aad u qurux badan.